HomeWararka CiyaarahaAc Milan oo guul 2-1 ka gaartay Spezia iyo Inter Milan oo bar-baro lagu qabtay Horyaalka Serie A Italy
September 26, 2021 Wararka Ciyaaraha, Falanqeynta Kulamada, Horyaalka Italy 0
Kulamo ka tirsan Horyaalka Serie A Italy ayaa la ciyaaray iyadoo kooxda Ac Milan oo booqasho ugu tagtay Spezia ay guul kasoo gaartay ciyaar ku soo dhamaatay 1-2.
Goolal ay kala dhaliyeen Daniel Maldini iyo Brahim Díaz ayaa Ac Milan ugu filneyd inay qabato hogaanka Horyaalka kadib bar-barihii kooxda Inter Milan.
labada kooxood ayaa qeybta hore ku kala nastay goolal la’an kadib markii ay sameeyeen isku dhinac walbo ah.
bilowga qeybta hore daqiiqadii 48aad ayay kooxda Ac Milan qabatay hogaanka ciyaarta waxana goolkaasi u dhaliyay Daniel Maldini, lakin goolkaasi waxaa ka bar-bareeyay D. Verde daqiiqadii 80aad ee ciyaarta.
Brahim Díaz ayaa Ac Milan hogaanka ku soo celiyay ciyaarta oo socota 86 daqiiqo isaoo farta ka saaray dhibcaha ay hogaanka ku qaban laheyd guud ahaan ciyaarta ayaa ku soo dhamaatay 1-2.
Natiijada ayaa ka dhigan in Ac Milan ay qabato hogaanka horyaalka iyadoo leh 16 dhibcood waxana ku soo xigta Napoli oo leh 15 dhibcood.
Dhanka kale Inter Milan ayaa lagu qabtay bar-baro 2-2 oo ay kala kulantay kooxda Atalanta taasi oo ka dhigeysa in ay u dhacdo booska 3aad ee horyaalka.